japanSamachar | जापान समाचार | जापानमा कोरोनाबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ! संक्रमित १७२८ पुग्दा ७६६ डिस्चार्ज-मात्र ४३ जनाको मृत्यु
(Japan)2nd April | 2020 | Thursday | 6:29:38 PM || (Nepal) 3:14:38 PM
जापानमा कोरोनाबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ! संक्रमित १७२८ पुग्दा ७६६ डिस्चार्ज-मात्र ४३ जनाको मृत्यु
POSTED ON : Saturday, 21 March, 2020 | Views : 5438
जापानमा दैनिक कोरोना भाईरसबाट संक्रमितको निधन, संक्रमित बढेको बढ्यै भन्ने समाचारमात्र पढ्दा वा सुनिरहँदा तपाई आत्तिनुभएको हुनसक्छ ।
जापानमै हुनुहुन्छ वा तपाईका कोही मान्छे जापानमा हुनुहुन्छ भने आजको मितिसम्म आत्तिनुपर्ने वा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
किनभने अहिलेसम्म जापानमा कोरोना भाईरसबाट संक्रमितको संख्या केवल १ हजार नाघेको छ । यसमध्ये कोहीपनि नेपालीहरु कोरोना भाईरसबाट संक्रमित भएको पाईएको छैन ।
मार्च २१ तारिख शनिवार मध्यान्हसम्ममा जापानमा १ हजार १६ जना व्यक्ति कोरोना भाईरसबाट संक्रमित भएको यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।
यस मध्येपनि चिनको हुहानबाट बिमानमा चार्टर गरि ल्याईएका २४ जना रहेका छन् । त्यो संख्या समेत घटाउँदा जापानमा अहिलेसम्म मात्र ९ सय ९२ जना संक्रमित भेटिएका छन् ।
त्यसो भए १७ सय संक्रमित कसरी पुग्यो त ?
जापानको योकोहामा समुन्द्र तटमा कोरोना भाईरस संक्रमितहरु भएको आशंकामा ३७ सय यात्रु रहेको डाईमण्ड प्रिन्सेस पानी जहाँज रोकियो । जसमा रहेका मध्ये हालसम्म ७ सय १२ जना संक्रमित पाईएका छन् ।
ति संक्रमित मध्ये सबै जापानी होईनन् । त्यसमा पनि उक्त पानी जहाँजमा जापानबाट संक्रमण फैलिएको कुनै आधार पाईएको छैन ।
मात्र उक्त पानी जहाँजबाट हंगकंगमा उत्रिएका एक यात्रु कोरोना संक्रमित भेटिएपछि आपतकालिन रुपमा जापानले झिकाएर सबै यात्रुहरुको स्वास्थ्य चेकजाँच थालेको थियो ।
दुईहप्ता लामो चेकजाँचका क्रममा ७ सय संक्रमित भेटिएकामा पछि थपमा पनि संक्रमण भेटिंदा त्यो संख्या बढेर ७ सय १२ पुगेको छ ।
अमेरिका, दक्षिण कोरिया सहित क्यानडा लगायत देशले बिमान चार्टर गरेर लगेका सम्वन्धित देशका थप केही व्यक्तिमा पछि संक्रमण पाईएको बताईएको छ ।
त्यो संख्या जापानमा संक्रमित भएकाहरुको कुल संख्यामा जोडिएको छैन ।
तर जापानमा संक्रमण पाईएकाको संख्यामा भने एकैपटक ७ सय १२ जना थपिंदा संक्रमितको संख्या धेरै देखिन पुगेको छ ।
जापानमा के ४३ जनाले नै कोरोना भाईरस संक्रमणबाटै ज्यान गुमाएका हुन् त ?
जापानमा कोरोना भाईरसको संक्रमण भेटिएका ४३ जनाले हालसम्म ज्यान गुमाएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
ज्यान गुमाएका मध्ये जापानमै संक्रमण पार्ईएका ३४ जना रहेका छन् । ८ जना माथि उल्लेख भएका पानी जहाँजमा संक्रमण पाईएका यात्रुहरु हुन् ।
कोरोना भाईरसको संक्रमण भएर ज्यान गुमाएकाहरुको उमेर, रोग, कारण र अत्य पक्ष हेर्दा जापानमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिंदैन ।
ज्यान गुमाएकाहरु ७६ बर्ष उमेर माथिका त्यसमा पनि भाईरसको संक्रमण अघिदेखीनै विभिन्न रोगको शिकार भई औषधि सेवन गरिरहेका एवं शारिरिक रुपमा कमजोर रहेकाहरु छन् ।
हालसम्म ज्यान गुमाएका मध्ये ३२ जना माथि उल्लेख बृद्ध, कमजोरी, रोग लागेका वा रोगसंग लड्नसक्ने क्षमता कमजोर भएकाहरु पाईएको जापानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस बाहेक कोरोना भाईरसको संक्रमण भएको एकहप्तादेखी १७ दिनपछि मात्र उपचार थालिएकाहरु समेत रहेका छन् । जसमा एकजनाको मृत्युपछि मात्र स्वास्थ्य रिपोर्ट कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो भने अर्का एकको अस्पताल उपचारको लागि भर्ना भएको दिननै मृत्यु भएको बताईएको छ ।
के त्यसो भए ज्यान गुमाउने सबै रोगी वा बृद्धमात्र हुन् त ?
दुईसाता अघिमात्र आईचि प्रिफेक्चरमा ५७ बर्षका एक जापानीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो ।
संक्रमण पुष्टिपछि चिकित्सकहरुले घरमा एक्लै बस्न र चिकित्सकले दिएको निर्देशन अनुसार औषधि सेवन र अन्य विधि अपनाउन सचेत गराए ।
तर घर पुग्न नपाउँदै ति व्यक्ति अरुलाई संक्रमण सार्नभन्दै घातक कर्ममा लागे । एकदिनपछि मात्र घटना पत्ता लाग्दा उक्त व्यक्तिले अन्यमा संक्रमण मात्र सारेनन् आफ्नो मृत्युको बाटो समेत रोजे । रोग संक्रमणपछि पनि मादक पदार्थ सेवन, तापक्रम अनुकल आफुलाई नराख्ने तथा औषधि सेवन नगर्दा अस्पताल भर्ना भएरपनि उनले ज्यान गुमाए ।
यो घटनाले के पुष्टि गरेको छ भने उमेर कम भएपनि र तपाई बाहिरबाट हेर्दा हृष्ठपुष्ट र बलियो हुनुभएपनि कोरोना भाईरसको संक्रमणभएपछि चिकित्सकको निर्देशन अनुसार सबैकुरा पालना गर्नुभएन भने त्यसले ज्यान जोखिममा पार्नसक्छ ।
औषतमा रोगसँग लड्नसक्ने क्षमता युवावर्गमा धेरै हुनेभएकाले संक्रमणपछि पनि संक्रमणमुक्त हुनेको संख्यामा युवा उमेरकाहरुनै धेरै छन् ।
तर मुटु, कलेजो, मृगौला, छाति सम्वन्धित अन्य रोग सहित स्वासप्रस्वास लगायत कयौं रोग लागेका बिरामीलाई यो रोग बढी खतरनाक देखिएको छ ।
उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता रोग लागेका बृद्धबृद्धा, बालबालिका, सुत्केरी वा गर्भावस्थाको महिलालाई कोरोना संक्रमण भएमा त्यसले अन्यमा भन्दा छिटो असर पारेको हालसम्मको अध्ययन रिपोर्टका आधारमा विश्वस्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको रिपोर्ट र समाचारहरुले पुष्टि गरेको छ ।
जापानमा उपचार भईरहेकाको अवस्था के छ त ?
संख्यामै हेर्ने हो भने संक्रमित भएका सबै संक्रमित मध्ये ६० जनाको अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
हरेक दिन उपचार भईरहेका केहीको अवस्था खराब बन्दै जाँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या दैनिक थपिइरहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र ७ जना संक्रमितको अवस्था थप विग्रिएर चिन्ताजनक हुन पुगेको स्वास्थ्य अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
विश्वभर संक्रमित भएकाहरुको अनुपातमा हेर्दा जापानमा संक्रमण फैलने क्रम, जोखिममा रहेका सहित ज्यान गुमाउनेको संख्या अत्यन्तै न्युन रहेको छ ।
यस आधारमा जापानले समयमै चालेको कदम सुझबुझपूर्ण, बुद्धिमतापूवर्क र योजनाबद्ध थियो जसले गर्दा कम क्षति भएर संक्रमण फैलन पाएन भन्न सकिन्छ ।
यदि विद्यालयहरु तीनसाता अघिनै बन्द घोषणा, मनोरञ्जन स्थल, खेल, ठूला कार्यक्रमहरु रद्द नगरिएका भए यतिखेर जापान ईटाली वा ईरानको अवस्था भोगिरहेको हुनसक्थ्यो भन्ने अनुमान जो कसैले होक्काईदोका विद्यालय अनि ओसाकामा मनोरञ्जन स्थलबाट फैलिएको संक्रमित संख्यालाई हेरेर अनुमान लगाउन सक्दछ ।
जापान सहित विभिन्न देशमा उपचार गराईरहेकाहरु कसरी निको भईरहेका छन् ?
रोगको औषधि, उपचार वा अन्य कुनैपनि विधि अहिलेसम्म यो नै हो भन्ने केही पुष्टि र प्रमाणित कतै भएको छैन ।
एचआईभि संक्रमितलाई दिईंदै आएको औषधी देखी दम रोगीले प्रयोग गर्ने औषधि प्रभावकारी भएको यसअघि विभिन्न देशका चिकित्सकहरुले केही व्यक्तिमा गरेको प्रयोगका आधारमा बताएका थिए ।
पछिल्लो तीनदिन यता भने चिनियाँ सहित अन्य देशका वरिष्ठ चिकित्सकहरुले समेत जापानमा फुजिफिल्म तोयामा केमिकलले उत्पादन गर्दै आएको फ्लु संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गरिने एभिगान ट्याबलेट औषधि प्रयोगबाट कोरोना संक्रमितलाई निको बनाएको बताएका छन् ।
यद्यपी यसले पनि सतप्रतिशत काम गर्ने प्रमाणित भएको छैन र यो प्रयोग र परिक्षणकै क्रममा रहेको छ ।
जर्मन सहित चिनियाँ र अमेरिकाले निर्माणको चरणमा रहेको बताएको भ्याक्सिन सबै परिक्षण चरणमै छन् । जसको उत्पादन र प्रयोग पुष्टिमा कसैलेपनि दाबी र प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् ।